West Heidelberg Community Legal - WE'RE STILL OPEN - service availability during COVID-19 (Somali) - Banyule Community Health
Home » West Heidelberg Community Legal – WE’RE STILL OPEN – service availability during COVID-19 (Somali)
April 22, 2020 · Events, Video
WHCL waxay bixisaa talo sharciyeed oo bilaash ah oo lugu caawiyo dadka deggan xaafadaha Banyule.
Digniin: Waxaan kalmeenaa xubnaha ugu liita ee bulshadayada iyo adeegyadayada qaarkood waxay leeyihiin shuruudo u-qalmitaan gaar ah, oo ay ka mid tahay inaad haysato Kaarka Daryeelka Caafimaadka ama Kaarka Dadka Da’da (Healthcare or Pension Card).
Waxaan haynaa tilmaamo ku saabsan aagagga aan ka caawin karno. Hoos waxaa ku yaal liiska sharciyada aan ka caawin karno.
Shilalka gawaarida ee aan caymiska lahayn
Amarada faragelinta (intervention orders)
Magdhow dambi (victim of crimes application)
Dembiyada yar yar
Arrimaha ilaalinta ilmaha
Fadlan naga soo wac 9450 2002. Haddii aanaan toos kuu caawin karin, waxaan kuu gudbin doonnaa adeeg ku caawin kara.